Tinofanira Kurega Kutaura Anesimba Patinoreva Akakurumbira | Martech Zone
Isu Tinofanirwa Kurega Kutaura Kune Simba Kana Tichireva Mukurumbira
Mugovera, December 29, 2012 Mugovera, December 29, 2012 Douglas Karr
Ndakaiona zvakare nhasi… imwe 2012 Influencer Chinyorwa. Ini handina kukwanisa kupfuura nerunyorwa rwese, zvakadaro, nekuti ini ndaive ndakabatikana kubvarura nzara dzangu pasi pechiso changu uye kudhonza bvudzi rangu kubuda. Yakanga isiri iyo yekukurudzira rondedzero zvachose, yaingovawo mamwe mukurumbira runyorwa. Kuti uve nechokwadi chekuti tese tinonzwisisa mutsauko, ngatienderere mberi nekutsanangura izvo zviviri:
Popular: Kufarira, kuyemurwa, kana kunakidzwa nevanhu vazhinji kana nemumwe munhu kana boka.
Inokurudzira: Iine simba rakakura pane mumwe munhu kana chimwe chinhu.
Kune imi vatengesi kunze uko, pane musiyano mukuru pakati pezviviri. Zviri maziso eziso maringe nechinangwa. Kana iwe uchida vanhu vazhinji ku ona zvinhu zvako… enda kune mukurumbira. Asi kana iwe uchida kuti vanhu vazhinji vauye tenga zvinhu zvako… enda kufurirwa. Vanhu vakakurumbira kana zvigadzirwa vane vanhu vazhinji izvo se ivo. Vakakurumbira vanhu kana mabhureki vane vanhu avo kuvimba kwavari.
Kunyange zvakadaro usazviwana? Mumwe wamai vanonyanya kuzivikanwa muna 2012 zvine nharo Nicole “Snooki” Polizzi. Pa Twitter, Snooki ane mamirioni 6.1 vateveri. Snooki ane mamakisi eKlout makumi masere nemasere. Misoro yaSnooki inosanganisira kutora mifananidzo, pizza, kubheka, mauto, uye shangu. Zita raSnooki rakafananawo nekuva amai gore rino pane akawanda zvinyorwa.
Pasina mubvunzo Snooki ari mukurumbira. Asi angave kana asiri iye zvine simba pane idzi misoro inopokana. Vanhu vangangotarisa kuna Snooki nezvezvazvino mumitauro yeshangu sezvo ari pop icon ... asi zviri kukahadzika kuti achabatsira kukurudzira mafungiro ako pane yako inotevera kamera kutenga, kutenga pizza, mubvunzo wemauto, kubheka recipe kana mubvunzo wevabereki. Handisi kugogodza Snooki… ndichingonongedzera kuti Snooki ane mukurumbira, asi ane simba risinganzwisisike.
Dambudziko ndere izvi simba zvibodzwa uye zvinyorwa hazvinyatso kuita simba zvachose. Kunyora Snooki seanokurudzira chete hakusi kwechokwadi. Kana ndichida maonero ekutora mifananidzo, ini ndotsvaga Paul D'Andrea. Pizza? Ndiri kuenda kushamwari yangu James muridzi Brozinni's. Kubheka? Amai Vangu.
Iwe unowana iyo poindi. Asi iwe unocherekedza chimwe chinhu nezve vangu vanondikurudzira? Ivo havana mukurumbira uye havana mamirioni evateveri kana mafeni. Ivo vanovimbwa nekuti ini ndakavaka hukama hwehukama nemumwe nemumwe wavo nekufamba kwenguva uye ivo vakawana chivimbo changu. Ini handisi kudzikisira kuti vanhu vane mukurumbira vanogona kuve nesimba ... zvakawanda zviripo. Nekudaro, ini ndiri kudzikisira kuti uve nesimba, mumwe anofanirwa kuve anozivikanwa. Hazvisizvo.
Semuenzaniso wega, ndinoziva kuti ndave zvine simba munzvimbo yekushambadzira tekinoroji. Ini ndakabvunza pamusoro pemadhora mazana mashanu emamiriyoni emadhora ekutsvaga nekudyara mumakore mashoma apfuura ndikapa hukuru hukuru kumakambani mazhinji. Izvo zvakati, ini handisi mukurumbira munzvimbo. Iwe hausi kuzondiwana ndiri pamusoro pegumi yemazita akawandisa uye ini handisi kubatidza zviitiko mumasocial media nekushambadzira. Ini ndinotenda, dai zvinyorwa zvacho zvainyorwa zvichibva pahutungamiriri hweindasitiri uye kuvimba, ndaizozviwana ndave pachinzvimbo chakakwirira zvakanyanya Icho hachisi chichemo… kungo tarisisa.
Isu tinofanirwa kutsvaga nzira yekusiyanisa zvirinani pakati pesimba nemukurumbira, hazvo. Vashambadziri vanofanirwa kutsvaga vanokonzeresa uye kuisa mari nevanokurudzira kubatsira kugovana zvigadzirwa zvavo nemasevhisi. Nekudaro, vashambadziri vanofanirwawo kudzivirira kupambadza mari kune izvo zvinongofarirwa uye zvisingakanganisa chero chinhu.
Tags: simbazvine simbamukurumbiramukurumbira
Zvita 30, 2012 na6: 25 PM
Ini ndinofunga tinoda wechitatu chikamu chinopfuura "chakakurumbira" uye "chine simba" icho chiri kungo "kuoneka." Ini handingataure kuti Snooki ndiye wese anozivikanwa ("senge, anoyemurwa kana kunakidzwa") zvakanyanya sekungoonekwa kwake zvakanyanya.
Kutenda nekugovana, zvakadaro, Doug!
Zvita 30, 2012 na11: 38 PM
Douglas, sekuona kwawakaita, isu paShiri Shiri tinotenda kuti mukurumbira pakati pevanyanzvi vemusoro wenyanzvi ndiyo gweta rakanaka munzira yekufurira, hunyanzvi, nezvimwe. Izvi zvinoita sei mumaonero ako senzira iri nani yekuyera pesvedzero?
Dec 31, 2012 pa 5: 03 AM
Mhoro @marshallkirkpatrick: disqus! Shiri Diki inoita basa rakakura kudaro pakupa madimikira akasiyana ehurukuro yakapihwa yatinokwanisa kuzivisa vanokurudzira. Kunyangwe mukati mediki pane njodzi mukutarisa mukurumbira chete. Ini ndinoshamisika kana paine zviito zvakaita sekudzokorora, kugovana kwekuwedzera, nezvimwewo izvo zvinozarura kugona kwemunhu kukurudzira mumwe kutora danho. Kupiwa maakaundi maviri epa twitter - imwe ine vateveri vazhinji uye imwe iine vateveri vashoma asi yakawanda yekudzokorora - ini ndaizotarisa kune yekupedzisira.
Zvita 31, 2012 na4: 48 PM
Douglass, ndatenda nekunyora izvi. Asi ikozvino NDINOFANIRA kubvunza kuti izvi zvinorevei: “Shiri Diki inoita basa rakakura kudaro pakupa zviyero zvakasiyana zve
yakapihwa musoro wenyaya watinokwanisa kuziva vafudzi. ”
Ini ndiri mudiki Shiri beta anotora chikamu asi ini handingoone ichi chiri chishandiso chinondibatsira. Zviripachena ndiri kushaya chimwe chinhu uye kuti chimwe chinhu ndizvo zvauri kuwana mune ino komendi. Ndokumbirawo kuti mufunge kunyatso tsanangura? Ndatenda zvikuru.
Zvita 31, 2012 na11: 04 PM
Mhoro @ google-8dffa4a27cb92d8c652480f605a5a5bb: disqus - neChidiki Shiri, ini ndinofarira chokwadi chekuti chiitiko ndechimwe chemafirita uye kuti ndinogona kuenzanisa zviitiko, kuteerera, uye vatungamiriri vemisoro vachipesana nekoramu inoteedzerwa kwazvo. Haisi kuburitsa iripapo runyorwa rwevanokurudzira, asi zvinondigonesa kudzosera kumashure uye kumberi uye ndimboita zvishoma ongororo yeakaundi.
Chokwadi chinotaurirwa, zvishandiso zvakaita seizvi hazvisi izvo zvinokurudzira kunyora ichi chinyorwa. Izvo zvaive zvese zvisina musoro Top Influencer zvinyorwa zvegore ra2012 zvakandikurudzira. Ndiri kufarira maturusi akaita seKlout, Appinion, uye Little Shiri - vari kuyedza kuumba maalgorithms ekupa mhedzisiro. Iri dambudziko rakaomarara!
Ndira 2, 2013 na3: 53 PM
Douglas - Zvakanaka kuona iwe uchiri kuburitsa mureza pane iyi nyaya. Takatora nguva tichiedza kudzidzisa vanhu nezvenyaya iyi chaiyo. Tarisa uone vhidhiyo yatichangobva kugadzira iyo inowana moyo wepositi yako. http://appinions.com/videos/the-true-meaning-of-influence/ Ramba uchiita basa rakanaka.